नारीप्रति वाइवल र पश्चिमी जगत | नेपाल दर्शन
नारीप्रति वाइवल र पश्चिमी जगत
आजकल नेपालमा महिला हक अधिकार र उत्थान गर्न भनेर युरोप र अमेरिकाका इसाईले डलर बोकेर नेपालमा कार्यक्रम चलाउदैँछन । नेपालका नारीको हक अधिकारका कुरा गर्दछन । नेपाली नारी पनि मख्ख परेर तिनका अनुयायी बन्दछन र तिनका शैलीलाई अनुसरण गरेका छन । पौरस्त्य संस्कारले नारीप्रति गरेको सम्मान र उच्च आदर्शको व्यवहारलाई अपमान भन्दै नेपालका नारी इसाई संस्कारमा अभ्यस्त हुँदै गएका छन । नारीप्रति इसाईको दर्शन, नीति के छ त्यसबारे पनि केही उल्लेख गर्नु सान्दर्भिक हुनेछ ।
पुरानो करार (Old Testament) इसाई सम्प्रदायको ग्रन्थ हो । त्यसमा उल्लेख भए अनुसार इसाइमतका प्रमुख शिष्य सेन्ट पालले नारी दर्शन सार्वजनिक गरेका हुन । उनका अनुसार स्रष्टाले नारीलाई सृजना गर्ने मूल योजना बनाएका थिएनन । यो पछि बनाएकाले नारी सृजनाको सिद्धान्तलाई पछिको सोच भनिन्छ । सृष्टिकी पहिलो नारी ईभ का कारण नै सृष्टिको पहिलो पूरुष एडम लाई स्वर्गबाट निष्कासन गर्नु परेको थियो । ईभबाट नै पापको जन्म भएको हो । नारीको जन्म केवल पुरुषको मनोरञ्जन गर्ने साधनका रुपमा भएको हो, त्यसरी नै लिइनु पर्दछ भन्ने मान्यता राख्दछन ।
वि.स. ६४२ (सन ५८५) मा म्याकनमा नारी र उनको आत्मा विषयक एउटा ठुलो गोष्ठीको आयोजना गरियो । गोष्ठिमा ९५ जना विज्ञ र विशेष्ज्ञको उपस्थिति थियो । लामो बहसपछि सभाले गरेको निर्णय थियोः( इसाई स्त्री दुष्ट आत्मा (इभिल) हुन । गैर इसाई स्त्रीलाई त मानवीय वस्तु नै मान्नु हुँदैन । मान्नु अधार्मिक र सैतानी कृत्य हुनेछ । यो कुरा इसाईको ग्रन्थ डिक्सनरियो फायोडल को पृष्ठ ५६ मा उल्लेख गरिएको छ । नारीबारे इसाईको यस्तो दर्शन भएकाले नारीलाई जनगणनामा समावेश गरिदैन्थ्यो । किनकि नारी मानिस थिएनन । त्यसकारण उनीहरुलाई सम्पत्तिको हकदार मानिदैन्थ्यो । विश्वविद्यालयबाट डिग्री प्राप्त गर्ने हकथिएन ।
तेह्रौ. शताब्दीमा पोप इन्नेसेन्ट तृतीयको पालामा चर्चका पादरीहरुकालागी नारी सेलिब्रेसी (कुमारी) नै रहनुपर्ने नियम बन्यो । त्यस अन्तर्गत नारीले शरीर, काम बासना र विवाद तीन कुरा गर्न नपाइने नियम बन्यो । नियमअनुसार नारीको विवाह वर्जित भयो । अनिर्बन्ध कामभोगलाई खुल्ला छुट भयो । सेलिब्रेसीको अर्थ हिन्दु समाजमा वर्णित ब्रम्हचर्य र इन्द्रिय निग्रह जस्तो कुरा होइन । सेलिब्रेसीको अर्थ कसैलाई लोग्ने बनाएर बस्न नपाउने तर पादरी, विशप तथा क्लर्जीहरुलाई चाहे अनुसार सम्भोग गर्न दिनु थियो । अर्काे शब्दमा यो यति गिरेको थियो कि सेलीब्रेसी वेश्यागमन गर्ने व्यवस्था थियो । चरित्रको स्तर यति गिरेको थियो कि सेलिब्रेसी धारण गरेका पादरीका आफ्ना बहिनी र आमासँग पनि यौन सम्पर्क राख्ने छुट थियो । यसलाई अनैतिक भन्न छाडेर राज्यले पादरीहरुको नजिक आमा र बहिनी एक्लै जान नपाउने नियम बनाएको थियो । चर्चले यिनीहरुबाट वेश्या कर समेत असुल गर्दथ्यो । नारीप्रतिको यो व्यवहार इसाई समाजमा लामो समयसम्म रहिरह्यो ।
सन १९२९ पछि पहिलो पटक लण्डनको प्रिभी काउन्सिलले नारीलाई पनि मनुष्यजाती मान्न सकिन्छ भनेर पारित गरेपछि मात्र मतदाता हुन पाउने हक स्थापित भएको थियो । पतिद्धारा प्रताडित महिलालाई माइतीबाट संरक्षण दिन नपाइने कानुन थियो । कसैले दिएमा त्यो चर्चबिरुद्ध अपराध मानिन्थ्यो । प्राच्यमा जन्मघर र कर्म घर भन्ने कुरा तथा माइतीकहाँ आवत जावत गर्ने, चाडबाडमा विशेष सम्बन्ध बनाई राख्ने, पूजाआजा गर्ने जस्ता संस्कार इसाईमा हुँदैनन, आजसम्म पनि छैनन ।
इसाईको धर्मग्रन्थ बाइबलको मूल प्रवेश नै नारीको उत्पीडन र दमनबाट प्रारम्भ हुन्छ । मध्यकालमा नारीलाई बोक्सी र डायनमा गणना गरिनथ्यो । नारीलाई सबै गल्तीका भागिदार र बोक्सी मानेर अनेक प्रकारका प्रताडनायुक्त दण्डदेखि मृत्युदण्डसम्म दिने कानुन बनाइएको थियो । कुनै पनि नारीलाई चर्चबाट बोक्सी घोषित गर्ने अधिकार थियो । नारीलाई दिइने दण्डलाई इसाईयत कानुन स्वरुप दण्ड गर्ने बारे इसार्ई ग्रन्थमा उल्लेख गरिएको छ ।
नारीलाई नांगै पारेर कोर्रा हान्ने पीडादायक यन्त्र मेसिनबाट अंग समातेर दुछने, उधोमुन्टो पारेर पानीमा चोपल्ने, शरीरभरि सियो घोच्ने जिउदै जलाउने पानीमा उमाल्ने आदि । बोक्सीलाई यसरी दिइने ६०० प्रकारका दण्डसजाय इसाइयत ग्रन्थमा उल्लेख छ । दण्डित गरिएकालाई चर्चले शुल्क पनि तोकेको थियो । यस्ता दण्ड दिने व्यक्तिलाई अभियुक्तले शुल्क तिर्नु पर्दथ्यो । शुल्क चर्चैपिच्छे फरकफरक हुन्थे । उदाहरणार्थ फ्रान्सको एउटा चर्चलाई लिऔँ । त्यसबेलाको त्यस चर्चले निर्धारण गरेको शुल्क अनुसार तेलमा उमालेको शुल्क ४८ फ्रैंक, चक्कामा शरीर राखेर अंगभगं गर्दा १० फ्रैंक, घोडाद्धारा घिसारेर शरीर ४ टुक्रा गराउदाँ ३० फ्रैंक, जिउँदै जमिनमा गाड्दा २ फैंक, नाक कान तथा जिब्रो काट्दा १० फ्रैक, तातो फलामले डाम्दा १० फ्रैंक आदि सबै रकम पीडित व्यक्तिले नै तिर्नु पर्दथ्यो । (विस्तृत जानकारीका लागि मटिल्डा जोसलिनको चर्च एण्ड स्टेटको पृष्ठ २६७ देखि हेर्नुहोस) विंसं १५४० देखि १८४० को ३०० वर्षमा ९० लाख महिलालाई चर्चले बोक्सी घोषणा गरेर दण्ड गरेको थियो । जुन परिवारमा एउटा बोक्सी हुन्थी त्यस परिवारको सबै सम्पत्ति हडप गरेर चर्चको सम्पत्ति गराइन्थ्यो ।
नारीलाई इसाई सम्प्रदायले उपेक्षा गर्ने संस्कार नै भएकाले मनोरञ्जन र यौन सन्तुष्टिका साधन मान्ने गर्दछन । त्यसकारण त्यहाँ यौन शोषण र बलात्कार सामान्य कुरा थिए । अमेरिकाको डग्लास स्थित रोमन क्याथोलिक चर्चमा पादरी प्रशिक्षणमा आएका ११-१८ वर्षका ११ महिलालाई ११ वर्षसम्म यौन शोषण गरेको आरोप सिद्ध भएको थियो । त्यस बापत ९० लाख अमेरिकी डलर दण्ड तिरेका थिए । त्यसै गरेर सेन्ट बारबराको सेन्ट एन्थोनी पादरी प्रशिक्षण केन्द्रमा ३४ जनालाई अनवरत यौन शोषण भएको मुद्दा पनि सााबित भएको थियो । ललितपुरस्थित सेन्ट जेभियरका फादरले पनि यसो गरेका थिए । यौन शोषणका कुरामा चर्चले ६ अर्ब ५० करोड अमेरिकी प्रसिद्धपुस्तक (क्याथोलिक प्रिस्ट एण्ड दि सैक्सुअल एव्युज अफ चिल्ड्रेन) नामक पुस्तकमा उललेख गरिएको छ ।
नारमिाथि इसाई सम्प्रदायको मान्यता रसंस्कारलाई अझ राम्ररी बुझ्न इसाई सम्प्रदायकाधर्माधिकारीले भनेका केही उद्गारलाई उधृत गरौ ।
१, पाँचौं शताब्दीको सुरुमा सेन्ट अगस्टाइनले भनेका थिए ; "जसरी आत्माले मांसेिसीमाथि अधिकारराख्दछ त्यसैगरी पतिले पत्नीमाथिअधिकार राख्दछ ।"
२, सेन्ट पौलको भनाई कोरिन्थिन ११.८.९ मा उललेख भए अनुसार "पुरुष स्त्रीबाट उत्पन्न हुँदैनन अपितु स्त्री पुरुषबाटै उत्पन्न हुन्छे । पुरुषको सृजना महिलाका लागि अपितु पुरुषका लागि नै महिलाभएका हुन ।"
३, वि.सं २०३४ (१९७७) मा पोप पाल छैठौले भनेका थिए, "महिलालाई पूजा गर्ने अधिकार छैन किनभने हाम्रा ईश्वर पुरुष हुन ।"
४, तेस्रो शताब्दीका टर्टुलिअनले भनेका थिए, "स्त्री पुरुष समान कहिल्यै हुन सक्दिनन । स्त्रीमा स्वतन्त्र विवेक हुँदैन । अतः उ आफ्ना निर्णय लिने अधिकारी होइनन। ऊ व्यक्तिगत निर्णय लिने अधिकारिणी पनिहोइन ।ईश्वरको सृष्टिको मूल विचारयोजनामा नारी जाति नै नभएकाले उ एक गौणाविचारकी परिणति मात्र हो । नारी सैतानको द्धार हो । "
५, सेन्ट अगस्टाइन र थोमस एम्बिनाकसले भनेका छन, "नारी ईश्वरको सनकले भरिएको तरंगबाट बनेकी हो । "
६, पोप पाल पहिलोले टिमोथीलाई लेखेको पत्रमा उल्लेख छ, "म कुनै महिलालाई शिक्षिका बनाउने आदेश दिन सक्तिन, न त उसलाई पुरुषमाथि हालीमुहाली गर्ने अधिकार दिन सक्तछु । महिला शान्तिसँग चुपचाप बस्नु पर्दछ ।"
७, पन्ध्रौं शताब्दकिो जेकब स्प्रेंगरले भनेका थिए, "स्त्री किमेरा हो अर्थात उसमा शेर, सर्प र बाख्राको आत्मा रहेको हुन्छ । ऊ मानिसलाई खान्छे, डस्छे र दिनभरि चपाइरहन्छे ।"
यसै क्रममा एसाई मुलुकमा नारीलाई राजनीतिक अधिकार दिईदैनथ्यो । सन १९२८ सम्म वेलायतका महिलालाई चुनावमा मत हाल्ने अधिकार थिएन । विडम्वना भन्नुपर्छ हामिलाई लादिएको प्रजातन्त्रको जननी वेलायत भन्न सिकाइयो ।
अश्चिमी इसाई मुलुकमा नारीलाई कहिल्यै विश्वास गरिदैनथ्यो । कामविशेषले पत्नीलाई घरमा छोडेर बाहिर जान परेका अवस्थामा फलामको चेस्टिटी बेल्ट लगाएर त्यसको चाबी आफूले लिएर जाने चलन थियो । आज त्यो मुलुक कसरी नेपालमा नारी अधिकारवादीको नाइके हुन सक्दछ । हामी उनीहरुको पछाडि किन लागि रहेका छौ । यो पूरा अज्ञान हो । मेकाउलियन शिक्षा पद्धतिका कारण गोरा महान भन्न थाल्यौँ । उनको भौतिकवादी दम्भी शिक्षाको पछाडि आँखा चिम्लेर लागेर आत्मघात मात्र गरिरहेका छौं ।
स्रोतः नेपालमा इसाईको चलखेल, डा.शास्त्रलत्त पन्त